DAAWO: War degdeg ah oo hadda nagasoo gaaray Muqdisho iyo Cali Xaaji Warsame oo gurigiisa – Puntland News.net
Home 2017 February 7 Somali News DAAWO: War degdeg ah oo hadda nagasoo gaaray Muqdisho iyo Cali Xaaji Warsame oo gurigiisa
DAAWO: War degdeg ah oo hadda nagasoo gaaray Muqdisho iyo Cali Xaaji Warsame oo gurigiisa
February 7, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 1
Muqdisho 7 February 2017 :- Magaalada Muqdisho wararka haatan naga soo gaaray waxaa ay sheegayaan in goor dhow uu ku dhawaaqi doono Musharrax Cali Xaaji Warsame in uu ka tanasulo Tartanka Xilka Madaxweyanah.
Wararka waxay sheegayaan in lagu qanciyay in uu ka tanasulo Musharaxnimadiisa xilka Madaxweynaha Soomaliya oo haatan ay ka harsantahay wax ka yar 24-saac.
Waxaana saacadaha soo socda lagu wadaa in uu saxaafada isugu yeero oo uu ku dhawaaqo Tanasulaadiisa,inkastoo aan si dhab ah loo ogeyn Musharraxa uu u tanasulayo iyo sababta oo aan ka ognahay kaliyaha in lagu qanciyay in uu tartanka ka haro.
Waa sidee xaalada Muqdisho?
Magaalada Muqdisho ayaa gashay labo maalin oo bandaw ah oo aan wax isu socod iyo dhaqdhaqaaq ganacsi ka jirin doonin meelaha qaar, kaddib markii ay bilaabatay diyaar garowga doorashada Madaxweynaha oo lagu wado in maalinta berri ay dhacdo.
Ammaanka magaalada Muqdisho ayaa si aad ah loo adkeeyay, iyadoo si isku mid ah xaafadaha magaalada u saameysay howl galada amni sugid ee ka socda.
Ciidamo kala duwan ayaa la dhigay jidadka waa weyn ee magaalada, iyadoo meelaha qaar lagu gooyay dhagxaan iyo ciid, waxaana magaalada qeybo ka mid ah u ekaatay goob dagaal oo dhufeyso leh.
Waddooyinka Maka Al-Mukarama, Wadnaha iyo kuwa kale ayaa saaka wax gaadiid isticmaaleyn, waxaana isgoysyada taagan ciidamo kala duwan.
Isu socodka dadka ayaa ahaa mid caadi ah, waxaana ay maalayeen lugahooda, dad badan ayaa la arkayay iyagoo u lugeynaya goobahooda shaqo sida Suuqa Bakaaraha.
Gaadiidkii ka baxayay magaalada iyo kuwii soo galayay ayaa la joojiyay, waxaana arrintan saameyn ay ku yeelatay qudaartii iyo xoolihii magaalada la soo gelinyay.
Dadweynaha ayaa sii adeegtay oo qaarkood hilib ayay u sii iibsadeen maalinta berri oo laga yaabo inay dhacdo hilib la’aan.
One thought on “DAAWO: War degdeg ah oo hadda nagasoo gaaray Muqdisho iyo Cali Xaaji Warsame oo gurigiisa”
Saida mohamed February 7, 2017 at 8:49 pm · Edit
Aad bay utaxadareen inla feegjignaado waa mihiim we will see the results of the presented